असक्षम पदाधिकारीको मारमा खेलाडी « KhelkudNews.com
Published On :2July, 2021 12:15 pm
टोक्यो ओलम्पिकका लागि पुरुष म्याराथनका लागि क्वलाीफीकेसन समय हो दुई घण्टा ११ मिनेट ३० सेकेन्ड जुन समय दक्षिण एसियाली कीर्तिमान भन्दा पनि धेरै कम हो । अनि महिला १०० मिटरको लागि ११.१५ सेकेन्ड समय हो । यसको मतलब हो, नेपाली एथलेटिक्सको स्तर ओलम्पिकमा सहभागिताका लागि लायक नै छैन ।
यसका बाबजुद , अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइअ‍ोसी)को सबैलाई समेट्ने भावना अनुसार नेपालले सहभागिताको अवसर धेरै अघि देखि पाउँदै आएको हो । यो प्रस्ट हो कि नेपालले पाएको अवसर योग्यताको अवसर होइन ,दयाको अवसर हो ।
डेढ वर्ष अघि नेपालका धावक गोपीचन्द्र पार्की ओलम्पिकमा छनोट भन्ने समाचार प्रकाशमा आएको थियो । पार्की एक खेलाडी हुन् । उनले आदर्श मान्ने प्रशिक्षक र सङ्घ अधिकारीले ओलम्पिक छनोट भएको कुरा गरेको सुनाए पछि उनी निरन्तर अभ्यास गरी रहे । तर विडम्बना, एकाएक अन्तिम समयमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पार्कीको साटो १०० मिटरमा सरस्वती चौधरी समावेश हुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे पछि यसले खेल क्षेत्रमा सनसनी फैलायो ।
नेपाल म्याराथन अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स महासङ्घ(आइ ए ए एफ)ले मान्यता दिएको अफीसीयल छनोट मापदण्ड भएको दौड थिएन । नेपाल एथलेटिक्स कमिटीले यसको आधारमा पार्की छनोट भन्ने हवाला दिएर पहिलो गलत गरेको थियो । दोस्रो ओलम्पिक छनोटका लागि आवश्यक दुई घण्टा ११ मिनेट ३० सेकेन्ड नेपालीका लागि अबका केही वर्ष अझ असम्भव नै हो ।
यस कारण यो वाइल्ड कार्ड आयोजकले दया गरेर उपलब्ध गराउने हो । यो दया अन्यले कम चासो दिएको स्पर्धामा या कम सहभागिता रहेको स्पर्धामा पाउने हो । यो टुङ्गो अन्य देशको छनोट या सहभागिता पछि लाग्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको सामान्य जानकारी नपाउने सङ्घ अधिकारी, ओलम्पिक कमिटीका अधिकारी र प्रशिक्षकका कारण एक जना खेलाडीको भावना माथि यत्ति ठुला बज्रपात परेको छकी सायद यो संसारको खेलकुदकै एउटा दुर्लभ घटना हो ।
अहिले पार्कीको नाम काटिएको होइन । सहभागी हुने प्रक्रिया नै नभई ओलम्पिकमा सहभागी हुने भन्ने हौवा विगतमा फीजाइएको हो । यदि उनी सहभागी भएर राम्रो परिणाम ल्याए सँगै बसेर फोटो खिचाउन तम्तयार हुनेहरू उनलाई चोट पर्दा हाम्रो कारणले हो भनेर स्विकार्न तयार छैनन् । ओलम्पिक साइकलको समाप्तिसँगै कुल छनोट खेलाडीको सङ्ख्या तय नभई वाइल्ड कार्डको टुङ्गो लाग्दैन । त्यो टुङ्गो नलागीकनै प्रचार गने सबै निकाय अहिले चुपचाप छन् । ओलम्पिक छनोटको आधार नै थाहा नभएको हो ? या एक जनालाई मानसिक यातना दिन यसो गरिएको हो ? एथलेटिक्स सङ्घका अधिकारीको पहिलो धारणा माग गर्ने की नगर्ने ?
धेरै खेल समीक्षकको मत छ की, सङ्घ अधिकारी, राखेप पदाधिकारी र बारम्बार पार्कीलाई ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीको रूपमा चित्रित गर्ने ओलम्पिक कमिटीका अधिकारी र प्रशिक्षकले नैतिकता माथि नै प्रश्न उठेको छ । नेपाली खेलकुदको सत्ता जस्ता व्यक्तिले चलाएका छन्, त्यसको असर पार्की माथि जसरी भएको छ , त्यो सुरुवात पनि होइन अन्त्य पनि होइन । शैली फरक हो , यस्तो अन्याय बारम्बार भएका छन् । यस्तै अधिकारीका कारण फेरी भई नै रहने पनि छन् ।